Business incurred loss as a result of August 1 incident
The business community in Harare is finalizing a paper on the huge losses incurred during the August 1 incident in which rowdy MDC Alliance went on a rampage to stone and loot shops.
Petrol and Diesel prices slashed down
Government has effected a downward review on fuel pump prices as announced by the Zimbabwe Energy Regulatory Authority (ZERA) with immediate effect.
Belgium Chamber of Commerce set to visit Zimbabwe
Zimbabwe`s engagement and re-engagement policy is proving to be a success as more and more investors from across the world are willing to invest in Zimbabwe.
ZIMRA mulls Forbes border post expansion
The Zimbabwe Revenue Authority (ZIMRA) is set to embark on expansion of Forbes-Machipanda Border Post (Mutare) following an increase in traffic volume and commercial activities along the Beira-Zimbabwe corridor as the trade route is proving viable for most traders.
Invictus releases positive gas and oil prospects
Following President ED Mnangagwa’s press statement on the prospects of gas and oil in Muzarabani last week, Invictus Energy has announced substantial resource potential at its Cahora Basa Project.
Zimbabwe prepares to participate in IATF Conference
Government clarifies 2% Tax mystery
The Ministry of Information, Publicity and Broadcasting Services has unpacked the mystery surrounding the 2% tax, to allay public fear due to a lot of speculation.
Buy Zimbabwe hails Govt position on local content policy
The Buy Zimbabwe campaign, which promotes the consumption of locally-produced products, has praised Government for the progress which it has made so far in the formulation of Local Content Policy that would promote the manufacturing and consumption of local brands.
GDP and economic growth at peak
President Emmerson Mnangagwa today President Emmerson Mnagagwa who was the guest of honour at the 2018 PF National assembly Meeting of the Youth League said that the country’s Gross Domestic Product (GDP) and Economic growths are at a peak.
Sanctions unjustified: Strive Masiyiwa
Founder and Executive Chairman of Econet Wireless, Strive Masiyiwa has called for the removal of sanctions on Zimbabwe saying the punitive measures are unjustified and Zimbabwe deserves to be given a chance to revive its economy.
Industrialization key to unlocking economy
Industrialization is the key to the resuscitation of the Zimbabwe economy and shared vision between Government and business to make vision 2030 attainable.
ED meets Captains of Industry
President Emmerson Mnangagwa has assured the nation that the use of bond notes is safe and secure and that the multicurrency system of exchange is here to stay.